Ururka SNU oo maanta si rasmi ah u doortay Hogaan Cusub | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Muqdisho March 20, 2012 (Moment Media Green) – Kullan ay maanta isugu yimaadeen beelaha Banaadiriga ee ku dhaqan gudaha gobbolka Banaadir ayaa waxa ay ku yeesheen Hotel-ka Shaamow ee magaaladda Muqdisho. Kullanka ayaa ujeedkiisu ahayd sidii guddoomiye cusub iyo ku xigeeno loogu dooran lahaa in uu yeesho ururka SANU. Ururka SANU ayaa waxa uu yahay urur ay ku mideysan yihiin beelaha Banaadiriga ee gobbolka Banaadir waxaana ka soo qeyb galay kullankaasi dad isugu jira Xildhibaano, Culimo udiin, Wax garad iyo Siyaasiyiin. Kullankaasi ayaa waxaa lagu doortay guddoomiye cusub oo uu yeesho ururka SANU, kullankaasi waxaa gudoomiye loogu doortay inuu noqdo Shariif Maxamed Siidii waxaana doorashadiisu ay u dhacday qaab gacan taag ah ugu dambeyntiina halkaasi lagu ansixiyey inuu noqdo guddoomiyaha rasmiga ee ururkaasi. Waxaana sidoo kale kullankaasi guddoomiye ku xigeen loogu doortay Xildhibaan Caamir Axmed Shakeeti waxaana sidoo kale halkaasi looga doortay guddoomiye ku xigeenka koowaad Marwo Fahmo Axmed Nuur. Kullanka doorashada kadib ayaa waxaa halkaasi kula hadlay saxaafadda gudoomiyaha cusub ee ururkaasi Shariif Maxamed Siidii waxa uuna sheegay in maanta wixii ka dambeeya ay la shaqeyn doonaan cid waliba oo ka shaqeyn doonto nabadda. Guddoomiyaha ayaa sheegay in magaaladda Muqdisho aysan deganeen kaliya hal qabiil oo qabiilo badan ay degan yihiin waxa uuna hoosta ka xarriiqay in dhankooda ay gacan ka geysan doonaan soo celinta nabada Soomaaliya. Gudoomiyaha ayaa ugu dambeyn xusay in iyagu ay yihiin urur oo aysan ahayn dowlad ayna si dhab ah ula shaqeyn doonaan cid waliba oo ka shaqeyneyso amuuraha nabada Soomaaliya.
Somalia: The dreadful roadmap is destined for failure as Puntland declares to print its own currency Matt Baugh: “Soomaalidu waa dad jecel doodda siyaasadeed!”